URamaphosa nelivu eyisipesheli kuMkhize
UMENGAMELI Cyril Ramaphosa uhlabise ilivu eyisipesheli uNgqongqoshe wezeMpilo, uDkt Zweli Mkhize, izolo ngodaba lwethenda ka-R150 million emnyangweni kaMkhize Isithombe: Ayanda Ndamane/African News Agency(ANA)
UNIKWE ilivu eyisipesheli uNgqongqoshe wezeMpilo kuleli, uDkt Zweli Mkhize, nguMengameli Cyril Ramaphosa izolo njengoba kuqhubeka uphenyo mayelana nenkampani eyathola ithenda ka-150 million, iDigital Vibes, okuthiwa ngeyabantu asondelene nabo.
UMkhize, ekhuluma nabezindaba izolo emuva kokuvakashela eNorthern Cape, uthe ubecele uRamaphosa ukuthi amnike ilivu eyisipesheli ngodaba lwale nkampani.
IBamba loMkhulumeli kaMengameli, uMnuz Tyrone Seale, lithe uRamaphosa unike ilivu eyisipesheli uMkhize ukuze abhekane nezinsolo ngale thenda yeDigital Vibes.
Uthe iSpecial Investigating Unit iphenya lolu daba kanti umengameli ulinde umbiko ngalolu phenyo.
“UNgqongqoshe wezokuVakasha, uNkk Mmamoloko Kubayi-Ngubane, uzobamba esikhundleni sikaMkhize kuze kube nesimemezelo esizokwenziwa,” kusho uSeale.
Bekulokhu kunengcindezi emaqenjini ezepolitiki ahlukene yokuthi uMkhize ehle esikhundleni njengoba kuqhubeka lolu phenyo.
UNksz Jessie Duarte, iPhini likaNobhala-Jikelele le-ANC, esithangamini sabezindaba izolo emuva komhlangano wekomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke kwale nhlangano, uthe bayakwamukela ukuthi uMkhize uzovela phambi kwekomiti lezobuqotho le-ANC.
Uthe lokhu kuhambisana nomgomo wengqungquthela yesi-54 kazwelonke yale nhlangano eyayiseNasrec.
UMkhize uxolisile ngalesi simo, wathi uyazizwa izikhalazo nokudumala okukhona kubantu.
Uthe abazange bayixoxe indaba yokuthi asule esikhundleni nomengameli kodwa bebesaxoxe eyelivu.
“Sikhulume eyelivu eyisipesheli kusalindwe uphenyo lweSIU. Yimina engiyicele kumengameli,” usho kanje ekhuluma eNorthern Cape lapho ebeyohlola khona ukusatshalaliswa kwemigomo njengoba izwe libhekene nesiqubu sesithathu seCovid-19.
UMkhize ulokhu emile ukuthi umsulwa odabeni lwale nkampani eholwa ngowayengumsizi wakhe, uNkk Tahera Mather, nowayengumabhalane wakhe, uNkk Naadhira Mitha.
Le nkampani yathola ithenda yokuthi yenze umsebenzi othinta iNational Health Insurance, yenza nothinta iCovid-19 njengoba yayihlela nezithangami zabezindaba, into okuthiwa kwakumele yenziwe wuphiko lwezokuxhumana emnyangweni.
Uthe ubhalele ikomiti lobuqotho le-ANC ethi ufuna ukuzovela phambi kwalo ukuze achaze kanti usuku azovela ngalo ubengakalazi.
UMkhize uthe akakaze asayine nkontileka, wathi akekho ungqongqoshe osayina izinkontileka nezinkampani.